Fitoniana tour sy Soluma « Tahotra an-dRavalomanana ny fanenjehana an’i Mbola Rajaonah ! »
Niharan’ny fisavana faobe ny fonenan’ilay mpandraharaha Mbola Rajaonah izay lasa mpiara-miasa akaiky amin’ny filoham-pirenena teo aloha, Marc Ravalomanana, omaly tontolo.
Nanoloana izany dia nanao fanambarana miaraka tetsy amin’ny toerana iray etsy Analakely ny avy eo anivon’ny fikambanana Fitoniana tour sy ny firaisankinan’ireo mpitarika eny amin’ny oniversite na Soluma. Mpanao asa soa sy mpanampy ny mpanao fanatanjahantena no fahitanay an’i Mbola Rajaonah hatramin’izay, hoy izy ireo. Ny mahagaga, maro ireo olo-malaza manana dosie maloto eto amin’ny firenena saingy navela amin’izao fotsiny. Rehefa ny mpandraharaha Mbola Joseph Rajaonah no mirona any amin’ny fanohanana ny kandida ho filoham-pirenena, Marc Ravalomanana, dia atao aminy izao antsojay rehetra izao. Andefasana IST sy antsoina any amin’ny Bianco ary niafara hatramin’ny fisavana trano (Perquisition). Noho izany dia manameloka sy manohitra amin’ny herinay manontolo izao izahay. Aminay dia midika tahotra an-dRavalomanana izao. Mankahery an’i Mbola Rajaonah izahay amin’izao manjo azy izao ary tompon’andraikitra feno amin’izay tohin’ny trangan-javatra hiseho eto amin’ny firenena ny olona ambadik’izao antsojay izao, hoy hatrany ireto tanora ireto.